ပုံပြောကြမယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ပုံပြောကြမယ်
Posted by Moe Z on Jan 10, 2012 in Community & Society, Education, Opinions & Discussion | 39 comments
child care story telling
ယနေ့ခေတ်တွင် မိဘများသည် မိမိတို့ကလေးများအား ပုံပြင်များပြောပြရန် အချိန်မပေးကြတော့ပါ။ ကလေးများအား ပုံပြင်စာအုပ်ဖတ်ပြခြင်း၊ ပုံပြောပြခြင်းဖြင့် ကလေးကို မိမိဖြစ်စေချင်သော သတ်မှတ်ထားသော စံတစ်ခုကို ပုံပြင်များမှတဆင့် ပြောပြနိုင်ပါသည်။ လမ်းလျှောက်တတ်ကာစ ကလေးများကိုပင် ပုံပြင်စာအုပ်များကို ရင်းနှီးအောင် စိတ်ဝင်စားလာအောင် ဖတ်ပြသင့်ပါသည်။ သို့မှသာ ကလေးများ၏စာဖတ်လိုစိတ်ကို ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်မည့်အပြင် ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အတွက်လည်း စာအုပ်စာပေများကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်လာစေပါမည်။ ပုံပြောချိန်မည်မျှကြာသင့်သနည်း ဆိုသော် ကလေး၏ အသက်အရွယ်နှင့် အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှုအပေါ်မူတည်ပါမည်။ သတိထားသင့်သည်မှာ ကလေးအားငြိမ်ငြိမ် ထိုင်ပြီးနားထောင်ဟူသော ဖိအားပေးမှုမျိုးမရှိစေရပါ။ ကလေးများစိတ်ဝင်စားမှု မကုန်ဆုံးမီ ပုံပြင်ပြီးဆုံးသင့်ပါသည်။ သို့မှသာ နောက်ထပ်တစ်ဖန် ပုံပြင်နားထောင်ချင်ပေလိမ့်မည်။
ကလေးများအား စာပေအမျိုးမျိုးနှင့်ထိတွေ့ပေးသင့်ပါသည်။ ဥပမာ- ရုပ်ပုံများသာပါသော ပုံပြစာအုပ်များ၊ ပုံပြင်အမျိုးမျိုး (ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များ၊ ကျေးလက်ပုံပြင်များ၊ တိုင်းရင်းသားရိုးရာပုံပြင်များ)၊ မူကြိုကဗျာစာအုပ်များ၊ ကလေးမဂ္ဂဇင်းများ၊ ကလေးအဘိဓာန်များ၊ ဂဏန်းအက္ခရာစာအုပ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာစာအုပ်များ (ဒိုင်နိုဆောများ၊ ခရုခွံများအကြောင်း စသည်)၊ ရသီဥတုနှင့်ဆိုင်သောစာအုပ်များ၊ အားလပ်ရက်များ၊ ပွဲတော်များအကြောင်း စာအုပ်များ၊ စိတ်ခံစားချက်ကိုဖော်ပြသောစာအုပ်များ၊ မိမိကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားသော အိမ်တွင်းလုပ်စာအုပ်များစသည်ဖြင့်။ ။
ပုံပြင်စာအုပ်များဖတ်ပြမည်ဆိုလျှင် စာကြောင်းများအောက်မှာ လက်ချောင်းလေးဖြင့်ထောက်ပြပြီး ဘယ်ဘက်မှ ညာဘက်ကို ဖတ်ရတဲ့အကြောင်းကို ကလေးအားသတိပြုမိစေသင့်ပါသည်။ ကလေးများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုသည်လည်း ပုံပြောမည့်သူအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ပုံပြောသူ၏အနေအထား၊ အမူအရာ၊ အသံနေအသံထားက ကလေးကိုစွဲဆောင်နိုင်ပါ သည်။ ကလေး၏အသက်အရွယ်နှင့် နားလည်နိုင်စွမ်းကိုကြည့်၍ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းကို ရွေးချယ်ရပါမည်။ ပုံပြင်ထဲမှ ဇာတ်ကောင်များအလိုက် အသံအမျိုးမျိုးကိုဖော်ထုတ်အသုံးပြုရပါမည်။ သို့မှသာ မိမိ၏ပုံပြင်က အသက်ဝင်ပြီး ကလေး၏စိတ်ဝင်စားမှုကို ဖမ်းစားနိုင်မည်။ ကလေးဘက်မှတုန့်ပြန်မှုကိုလည်း လေးစားစွာလက်ခံပေးပါ။ သို့သော် ကလေးအားသင့်တင့်သော ထိန်းချုပ်မှုအောက်၌ရှိပါစေ။ တစ်ချို့နေရာများတွင် ခဏလောက်စောင့်ပြီး ပုံပြင်ဆုံးတော့မှ ဒီအကြောင်းဆွေးနွေးတာပေါ့ဟု ပြောပေးပါ။
ပုံပြင်များကိုရွေးချယ်ရာမှာလည်း ကလေးရော မိမိပါနှစ်သက်မည့် ပုံပြင်မျိုးဖြစ်သင့်ပါသည်။ အကယ်၍ ကလေးမှ မိမိဖတ်ပြသောစာအုပ်ကို စိတ်မ၀င်စားလျှင် နောက်တစ်အုပ်ကိုပြောင်းသင့်ပါသည်။ ဖတ်ပြသင့်သောပုံပြင်အချို့မှာ – The Seven Labors of Hercules (ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း၏ အရေးပါပုံကို ပေါ်လွင်စေသည်)၊ Prince Charming (ရိုသေလေးစားမှုကို ဖော်ညွှန်းသည်)၊ The Boy who cried Wolf (ဖြူစင်ရိုးသားခြင်းကို အလေးပေးသည်)။ ။
လူ့အဖွဲ့အစည်းဟူသည် မိသားစုများ နေရာအနှံ့ဖြန့်ကျက်နေထိုင်ခြင်းနှင့် ဆင်တူပါသည်။ ကလေးများသည် ပုံပြင်များမှတဆင့် သူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်မိသားစုများနှင့် ဆက်သွယ်သလိုခံစားရစေရန် အရေးကြီးပါသည်။ ပုံပြင်များသည် ကလေးများအား စကားပြောဆိုဆုံးမနေခြင်း (သို့) စကားပြောလာစေရန်တိုက်တွန်းခြင်းထက် ပိုမိုထိရောက်ပါသည်။ ကလေးများ၏ စိတ်ကူးနှင့် ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားကိုလည်း တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကလေးများလည်း ရံဖန်ရံခါမှာ စိတ်အားငယ်တတ်ပါသည်။ သူတို့လေးတွေစိတ်ဓာတ်ကျနေချိန်တွင် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေသော ပုံပြင်များပြောပြခြင်း (သို့) ဆင်တူဖြစ်ရပ်မျိုးကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြီး ပြောပြခြင်းဖြင့် အားပေးနိုင်ပါသည်။ မိဘတိုင်းသည် ကလေးများနှင့်ရင်းနှီးနိုင်သော အခွင့်အရေးကောင်းကို လက်လွတ်မခံပဲ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော ပုံပြင်အချိန်လေးများကိုဖန်တီးပြီး ကလေးအားလှပသော ပုံရိပ်လေးများနှင့်အတူ ချော့သိပ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးများစာရိတ္တမြင့်မားစေရန် လွယ်ကူရိုးရှင်းသောဆောင်ပုဒ်လေးများကိုလည်း မှတ်သားစေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – We care & we share, Work first play later, Honesty is the best စသည်ဖြင့်…………။ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်လေးများကို အောင်မြင်စွာပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ကြပါစေ။
ကလေးများအတွက် ဘာသာစကားသင်ကြားခြင်းပို့စ်မှာ ဦးnature မေးထားတဲ့ ပုံပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကွန်မန့်နဲ့ဖြေရင် ရှည်နေမှာစိုးလို့ ပို့စ်တင်လိုက်ပါတယ် …
လေးစားပါတယ် ဆရာမလေးရေ့ …..
educational sciences ကိုလေ့လာတဲ့ ကျနော့် ငယ်သူငယ်ချင်းလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အမေ ဆီမှာ
အဲ့လို စာအုပ်လေးတွေ တွေ့ဖူးတယ်ဗျ. …ခရိယာန် မေတ္တာတော် အသင်းတခုခုပါပဲ …
အန်တီက သူတို့ တည်ထောင်ထားတဲ့ …ကုသိုလ်ဖြစ် မူကြိုတစ်ခုမှာ ဗော်လန်ဒီယာ ဆြာမလုပ်တယ်ဗျ…
သူတို့အိမ်ကို ကျနော် သွားသွားလည်တဲ့အခါ ဗမာဘာသာ ပြန်ထားတဲ့ ပုံပြင်စာအုပ်လေးတွေ ….
လက်ကို သန့်ရှင်းအောင် ထားဖို့တို့ … သားသားလေးက ကြောင်ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုတာမျိုး
ပညာပေးပါးပါးလေးတွေ တွေ့ဖူးတယ်ခင်ဗျ…ပုံလေးတွေနဲ့ပေါ့ ….
ဒါလေးတွေ ပျံ့ပွားအောင် လုပ်နိုင်က အလွန်ကောင်း၏ ဟု ထင်မြင်မိပါကြောင်း ….။
စကားမစပ် ကျနော် အသစ်ညှပ်လိုက်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံကို ဘယ်လို သိနေဒါလဲ ဟင်င်င်င်….
ဟုတ်ကဲ့ ကလေးတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်
ရုပ်ကြွပုံလေးတွေပါတဲ့ စာအုပ်လေးတွေရှိတယ် အဲဒီအကောင်လေးတွေကို နှိပ်လိုက်ရင်
ကျားဆိုရင် ကျားဟိန်းသံလေးထွက်လာတယ် စာလေးတွေလည်းပါလို့
ကလေးတွေကို Zoo ကိုရောက်နေသလိုခံစားရစေပါတယ် …
စကားမစပ် အဲဒီပုံကို မနေ့က ကိုရင်စည်သွပ်က သူ့ပုံတဲ့
အခုလာပြန်ပြီတစ်ယောက် Enrique လေးသနားပါတယ်
ကလေးနဲ့တော့ ပတ်သတ်တယ်. ..စာနဲ့တော့ မဆိုင်ဘူးပေါ့ …
တနေ့က ဟို၃ယောက်အိမ် သွားလည်ရင်း တီဗီ ကြည့်ဖြစ်တယ်…
၅နှစ်အောက် ကလေးလေးတွေကို ဈေးဝယ်ခိုင်းတာလေ…..
ဟဂျိမဲ့တဲ့ နို ခိုင်းမိုနိုတဲ့ ….
မိသားစု ပါတီအတွက် …အမေက ခလေးကို အိမ်နားက ကုန်စုံဆိုင် လွှတ်ပြီး ဈေးဝယ်ခိုင်းတာ …
ကလေးကို ပူးပေါင်း ပါဝင် ကူညီစေတတ်ဖို့ …လူမကြောက်ဖို့ လူတောတိုးရဲဖို့ သင်ပေးတဲ့ ….
အလေ့အထ ကောင်းလေး တစ်ခုပေါ့ဗျာ ….စာတွေ့ ပလပ်စ်အာလဖာ ..လက်တွေ့လည်း
「初めての買い物」 ဆိုပီး Googling လုပ်နိုင်ပါကြောင်း…
အထင်မလွဲပါနဲ့ ..ကအင်ဂျီးက ကျားကျားယားယား ဂျီးဘာ ….
ဂီဂီ့ ဆံပင်ပုံ အဟောင်းနှင့် အသစ် ကို သည် အဗေတာ ၂ခုမှာ တွေ့နိုင်ပါကြောင်း…
(ကြော်ငြာ ၀င်တွားဘာသည် …ဒက်ဂလောက်…ဒက်ဂလောက်….)
တားတာပြန်ရင် အိမ်က တားကြီးတားလေး..မီးမီးကြီး..မီးမီးလေးတွေကို..ချာမပေါတလို..ပုံပြောပြပါ့မယ် ချာမ
ဟိုးချေးချေးတုန်းက မေပေါင်ဆိုတဲ့ ကျောက်သထေးဂျီးဟာ အင်မတန် အကျင့်ယုတ်သတဲ့ကွယ်..
ကျန်တာ အဲလူဂျီးလာမှ ဆက်ပြောတော့မယ်…ဒယ်ဒီပေါက် ရှကီသွားထုလိုက်ဦးမယ်..
မခက်ပါဘူး ဦးနေးချားရယ် ရှိပြီးသားဗဟုသုတတွေရောမွှေပြီး create လုပ်လို့ရပါတယ်
မိုးစက်လည်း ဖတ်ထား မှတ်ထား နားထောင်ထားတာတွေကို တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ရေးထားတာဖြစ်လို့ Ref; ကို မညွှန်းတာပါ..
အဟီး…. ကြွက်ကလေးတွေ ငပိရည်နဲ့တို့စားတဲ့အကြောင်းလား။
ဟိုးရှေးရှေးတုန်း က ပေါ့နော်
အင်မတန် ရိုးသား ကြိုးစားတဲ့ မောင်ပေ ဆိုတဲ့ သူငယ်ချော လေး တစ်ယောက် နဲ့ အင်မတန် မှ ကလိန်ကျ ဘက်ကီးရိုက်တတ်တဲ့ ငပေါက်ဖော် ဆိုတဲ့ သူငယ်ဆိုးလေး တစ်ယောက် ဟာ ဘော်ဒါတွေ ဖြစ်ကြသတဲ့ ကွယ် ။
တစ်ရက် သူရို့ နှစ်ယောက် လမ်းသွားနေရင်း ၊ တစ်ယောက် ကို အထုပ်တစ်ထုပ် ကိုယ်စီ ကောက်ရကြသတဲ့ ကွယ် ။ အဲဒီ အထုပ်တွေ ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အထုပ်တွေထဲမှာ စိန်ပွင့်လေးတွေ ၁၀ ပွင့် စီ ပါတာ ကို တွေ့ ကြရသတဲ့ ကွယ် ။
အဲဒီမှာ ရိုးသားတဲ့ မောင်ပေ က တော့ ပိုင်ရှင် ကို မတွေ့ တွေ့ အောင် ရှာပေးတဲ့ အတွက် ၊ ရိုးသားကြောင်း ဆုချီးမြှင့်တဲ့ ဆုတံဆိပ် နဲ့ ဂုဏ်ပြုဆုငွေ အနည်းငယ် သာ ရလိုက်သတဲ့ ကွယ် ။
ဟို ငဘက်ကောင် ငပေါက်ဖော် က တော့ ပိုင်ရှင် ကို ပြန်မအပ်ဘဲ ၊ ရွှေဘုံသာ အလယ်လမ်း က ကမှောင်ချော ဆိုတဲ့ စိန်ဘာဘူ ဆီမှာ သွားရောက်ထုခွဲ ရောင်းချ ပြီး ဘိန်းကုန် ၊ လူကုန် ဆက်လက်ကူး ရာကနေ အခုတော့ သူဌေးကြီး ဖြစ်သွားသတဲ့ ။
ပုံပြင်ကလေး ကတော့ ဒါပါဘဲ ကွယ် ။
ကိုပေနဲ့ ပေါက်ကုန်းကုန်းတို့ရဲ့ ကလေးတွေကိုတော့ သနားမိပါတယ်
မိုးဇက်လေး ကို အထူးရှယ် နာနီ အဖြစ် ငှားချင်လာမိသကွယ်
လုပ်မယ် မလုပ်ဘူး အကြောင်းရယ် ပြန်ပေးပါနော်
မိုးစက်ရေ တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ စာစုလေးပါပဲ
တစ်ချိန်ချိန် အသုံးဝင်မှာမို့ ကူးယူသိမ်းထားလိုက်ပါတယ်
အဲဒီအချိန် အကူအညီလိုရင်လည်း ပြောပါမမနွယ်ပင်ရေ
အပေါ်ကကိုပေ…. ကိုပေရဲ့အိမ်မှာ နာနီတော့မလုပ်ပါရစေနဲ့
မိုးစက်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်မြောက်လို့ child care and development center ထောင်ဖြစ်ရင် ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ကလေးတွေကို အခမဲ့ပျိုးထောင်ပေးမယ်
စိတ်ချ .. အဲဒီအချိန်ရောက်ရင် ကတိတည်စေရမယ် ဦးနေချားရဲ့သားလေးသမီးလေးတွေမမီရင် မြေးလေးတွေတော့မီမှာပါ
မိုးစက် ကို ဘွဲ့တစ်ခုပေးမယ်ဗျာ။
အမှန်တော့ ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တာဟာ
စံနစ်တကျ ပြုစုပျိုးထောင်သင့်တဲ့ အကြောင်း
မိုးစက်က ရေးနေတဲ့အတွက် လက်ခုတ်တီးပေးပါတယ်ဗျာ။
ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်တော့ မခံယူရဲပါဘူး မိုးစက်ဝါသနာပါလို့လေ့လာနေတဲ့အပိုင်းမို့လို့ပါ ယနေ့လူငယ်နောင်ဝယ်လူကြီး ဆိုတော့ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခု
ဖြစ်လာဖို့အတွက် ကလေးတွေကနေစပြီး ဖောင်ဒေးရှင်းကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယူဆလို့ပါ
လူစိတ်ဝင်စားမှုနည်းတဲ့အပိုင်းမို့ အားပေးတာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော် …
ပုံပြောတာ လူကြီးက ကလေးကို ပြောပြရင် တော့ ကလေးတွေအတွက် စိတ်ကူးဥာဏ်ကွန့်မြူးစေတော့ ကောင်းတာပေါ့… ဥာဏ်ရည်တက်တာပေါ့..
ဒါပေမဲ့ လူကြီးက လူကြီးကို ပုံပြင်တွေ ပြောရင်တော့ ယုံတဲ့သူက ဥာဏ်ရည်နိမ့်တယ်လို့ ဆိုပြီး ပြောတဲ့သူက ဥာဏ်ရည်မြင့်တယ်လို့ ဆိုကြပြန်တယ် .. အဲ့ဒါလေးရော ဘယ်လို သဘောရသလဲဟင်…
just kidding my dear..
လူဂျီး က လူဂျီး ကို ပုံပြောလို့ 
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ယုံသွားရင်
သာယာပျော်ရွှင်စရာ အချစ်ဇါတ်လမ်းတစ်ပုဒ် လည်း ဖြစ်သွားနိုင်တယ် ဆိုတာ
နှလုံးသား ရှိသူတွေ ၊ ချစ်တတ်သူတွေ ဘဲ
ကျနော်တော့ မအားမလပ်ဖြစ်နေလို့ လူဂျီးက လူဂျီးကို ပုံပြောတဲ့ကိစ္စရပ်ကို တလမှာ ၂ရက်ပဲ
ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဗျာ …..အဲ့ဒါကတော့ မိုးရွာတဲ့ ရက် ရယ် …မိုးမရွာတဲ့ရက်ရယ်ပါ….
အဲ့လာကျောလာပေါ့ ….အဲ့လာ သင်ယူနေ/ချင် တာပေါ့ ….
ကျနော်တို့ အလုပ်က selling dreams လေဗျာ ….
ထုတ်ကုန်တွေ မရောင်းဘူး ..အဲဒါတွေ က sales ကဘဲတွေ ရောင်းလိမ့်မယ်..
ကျနော်တို့ကတော့ အိပ်မက်ပဲရောင်းမယ် …အိပ်မက်ရောင်းဖို့က ပုံပြောကောင်းဖို့လိုတယ်..
story making, story telling towards selling dreams ….
အဲ့ ..တခုတော့ရှိတယ်. ….selling ice to eskimos အထိတော့ သွားလို့မရဘူး …
အင်း ဘစ်ဇနက် အကြောင်းပီးတော့ ပါဆင်နယ်အကြောင်း ဆက်ရတာပေါ့…အာဟိ…
အဟမ်း …..ပါဆင်နယ်ပုံပြောတဲ့ ကိစ္စကတော့ …..ကျောလော့ဘာဘူးလေ …..
မိုးဇက်ရေ ဒီမှာ စာအုပ်ဝယ်၇င် စာအုပ်နောက်ကျောဖက်မှာ အသက်အရွယ်အလိုက် ကာလာနဲ့ ခွဲခြားပြထားတယ်။ သူ့ကာလာနဲ့ သူမှ စိတ်ဝင်စားတယ်။ သားအတွက် စာအုပ်စုတော့ မမှီက အခုအရွယ်အတွက်ရော နောက်ကြီးလာမဲ့ အရွယ်အတွက်ရော ၀ယ်စုတယ်။ သားက စာအုပ်တွေကို ကိုင်ကြည့်တယ် သူစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေတဲ့စာအုပ်ကို ကြည့်လိုက်ရင် တကယ်ပဲ သူ့အသက်အရွယ်နဲ့ အံ့ကိုက်။ အိမ်ကြီးရှင်က စာဖတ်ပျင်းလို့ မမှီက သားကို သူနဲ့တူမစိုးလို့ အခုတည်းက စာဖတ်ဝါသနာပါအောင် စာအုပ်လေးတွေ ၀ယ်ပေးပြီး စွဲဆောင်နေတယ်။ ပြန်ရောက်ရင် ရွှေတိဂုံတောင်ဖက်မုဒ်က စာအုပ်တန်းတွေ သွားမွှေမလို့။ ၅၅၀ပုံပြဇတ်တော်တွေ ဖတ်ပြမလို့။
မိုးစက် ၆နှစ်အရွယ်က ကာတွန်းလေးကို အခုထိမှတ်မိနေတာပြောဖူးတယ်နော်
ဘ၀မှာ မှတ်ဥာဏ်အကောင်းဆုံးအချိန်မှာ ဘာသာရေးအသိအမြင်မှန်ကန်ဖို့
သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေးတွေနဲ့ ပျော်စရာမိသားစုဘ၀လေးပိုင်ဆိုင်ထားလို့ မမမှီအတွက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်း
အရင်တုန်းကတော့ ကလေးတွေ အတော်များများက ညကို မအိပ်ခင် ပုံပြင်ပြောခိုင်းတာတို့ သီချင်းဆိုခိုင်းတာတို့ ရှိကြပေမယ့် ခုခေတ်ကလေးတွေကျတော့ ဥာဏ်ရည်လည်း ပိုမိုတိုးတက်လာတယ်လို့ မြင်မိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အရင်ကလေးတွေက မတ်တတ်ရပ်မစမ်းခင် ၀မ်းလျားမှောက်တာတွေဘာတွေရှိခဲ့ပေမယ့် ခုခေတ်ကျတော့ အဲလိုအဆင့်ကိုကျော်သွားကြတယ်။ ဒီလိုပဲ ပုံပြင်ပြောခိုင်းတာထက် သူတို့က ပြန်ပြောပြတဲ့ခေတ်ကို ရောက်သွားနေတယ်လို့ မြင်မိတယ်။ ကိုယ်တိုင်ဖတ်ချင်စိတ်လည်း သူတို့မှာရှိလာကြတယ်။ စာပေဆိုတာ ငယ်ငယ်ထဲက အကျင့်လုပ်ပေးတာ အရမ်းပဲ ကောင်းလှပါတယ်။ အကျိုးရှိသော စာပေနဲ့ အကျိုးမရှိသော စာပေတော့ လူကြီးတွေက ခွဲခြားပေးဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။
မမမနောရေ ကလေးလေးတွေကတော့ တစ်မျိုးစီပေါ့နော်
ဒါပေမယ့် မိဘကတော့ သူတို့ပြန်ပြောပြမှ သိရတဲ့အထိမဖြစ်အောင် နေရမှာပေါ့
အကောင်းဆုံးကတော့ ကလေးတွေကို စာကောင်းပေမွန်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေး
မိုးဇက် ရဲ့ ပုံပြောကြမယ်လေးဖတ်မိတော့မှ ကျမတူလေးကိုလည်း ပုံပြောပြရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေး ဖြစ်မိတယ်……… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
မိုးစက်ရေ- တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ အကျိုးရှိတဲ့ ပိုစ့်လေးပါပဲ။
ကလေးတွေကို ပြောပြလေ့ရှိတဲ့ စကားတစ်ခု ပြောရရင်-
အသုံးချသင့် မချသင့် စဉ်းစားရမည့် ပညာသာရှိသည်။ လို့…
ခါးပိုက်နှိုက်တဲ့ပညာ၊ ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာပညာတွေလည်း တတ်ထားရင် ကောင်းတာပဲ။
ဒါပေမယ့် အသုံးတော့ မချသင့်ဘူးပေ့ါ နော…
ကလေးလေးတွေက ကိုယ့်ထက်ပိုတတ်နေလို့ ခက်နေတယ် မိုးဇက်ရေ…..။ သူတို့လေးတွေ ပြောတဲ့ ပုံပြင်လေးတွေက ကိုယ်တို့ ငယ်ငယ်က နားထောင်ခဲ့ရတဲ့ ပုံပြင်တွေလို စိတ်ကူးယဉ်မဆန်တော့ဘူး…။ တစ်ကယ့်လက်တွေ့ ဘ၀မှာ သူတို့ကြုံ တွေ့လာတာလေးတွေ ကို ပုံပြင်လုပ်ပြီးပြောပြောနေလို့ တစ်ချို့ကလေးတွေဆိုရင် လက်လန်တယ်တစ်ကယ်ပဲ……..။
မိုးဇက်ရဲ့ တားတား မီးမီးလေးတွေကတော့ ကံကောင်းကြမှာပါ။
အသုံးချသင့် မချသင့် စဉ်းစားရမည့် ပညာသာရှိသည်)) ဆိုတာကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါတယ်
ဒါကြောင့်မိုးစက်လည်း ဆယ်တန်းအောင်ပြီးကတည်းက ပြေးလိုက်လွှားလိုက်နဲ့ နားကိုမနားရသေးဘူး
သများကိုအကြောင်းမပြန်လို့ ..သများခမျာ စိတ်မကောင်းတွေဖြစ်..အိပ်မက်ဆိုးတွေက်
မစားနိုင်လို့ ..မစားနိုင်လို့ 
အင်း … သူ့ကလေးမှမဟုတ်ဘူး
မိုးဇက်လေး… ကိုရင့်ကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက
ခု မိုးဂလေး ပုံပြောမယ်ဆိုတော့.. သိပ်နားထောင်ချင်ခဲ့တဲ့
ကိုရင် မင်းသားလေးအဖြစ် ၀င်ခံစားချင်ရို့ပါ။…
အဆိပ်မိနေတဲ့ မိုးဇက်လေးကို ကူညီပါရစေနော်…
မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ ပုံပြင်အများစု ကို တူလေး၊ တူမလေး တွေကို ပေးဖတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံပြင် အများစု က .. သားသမီး သုံးယောက် မွေးထားတယ်ဆိုပါတော့။ အငယ်ဆုံး က စိတ်ထားကောင်းတာတို့၊ အကြီးဆုံး က စိတ်ထားကောင်းတာတို့ ပဲအတွ့များပါတယ်။ ဘာလို့ အလယ်အလတ် တွေက ကြားညှပ် နေကြရမှန်း စဉ်းစားလို့ မရခဲ့ဘူး။ တကယ် ပဲ သူတို့ က မကောင်းတာ တွေ များ နေလို့ လား။ … ခုတော့လဲ အဝေးရောက် နေတာကြာပါပြီ။ ကြားတာတော့ ပုံပြင်စာအုပ် အစား story game တွေပဲ အသားကုန် ဆော့ နေကြတယ်တဲ့… ဦးလေး ခြေရာ ကို မဟုတ်တဲ့ နေရာ မှာ အမှီ နင်း တဲ့ ဟာလေးတွေ… ဟီး .. ကလေး တွေပြုစု ပျိုးထောင် တာ အနုပညာ တစ်ခု လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ လေးစားပါတယ် ဗျာ။
အင်း .. ကြည့်ရတာတော့ ကိုလုလင်က အလတ်ဖြစ်ရမယ်
ဒါကြောင့် ပုံပြင်တွေကို ကိုယ်တိုင်တီထွင်ဖို့ပြောတာ
ဂိမ်းအလွန်အကျွံဆော့တာ ကလေးတွေအတွက် မကောင်းဘူးနော်
puzzle လေးတွေဖြေခိုင်းကြည့်ပါ …